Podcast 9 × 15: Headphones ary ny fahanterana efa nomanina | Avy amin'ny mac aho
Herinandro hafa dia nihaona ny ekipan'ny iPhone News ary avy any Mac aho hiresaka momba ny vaovao Apple. Amin'ity tranga ity, tsy misy lohahevitra hodinihina, farafaharatsiny zava-dehibe, nanana ny ekipa namorona sy nanamboatra ny headphones tsy misy tariby Dotts izahay, headphone izay mitentina 70 Euro ary ho an'ireo izay nanao iray famerenana feno andro vitsivitsy lasa izay. Ny ekipan'ny Dots dia nanazava taminay ny fomba nahatongavan'izy ireo tamin'ny hevitra hoe hamorona headset tsy misy tariby vaovao na eo aza ny fahavokarana eo an-tsena amin'izao karazana fitaovana izao.
Saingy, ho fanampin'izay, ary noho ny tsy fahampian'ny fotoana, dia naneho hevitra momba ilay vaovao ihany koa izahay fa mpampiasa maro no nanamarina ny fihenan'ny fampisehoana ny iPhone. Fampisehoana iray, izay araky ny fitsapana samihafa, dia manamarina fa mihena izany Arakaraka ny isan'ny fitomboan'ny tsingerin'ny bateria.
Nisy mpampiasa maromaro izay nanao ny fitsapana tamin'ny fampiharana Geekbench, mampiseho ny fomba alohan'ny nanovana ny bateria, ny fahombiazan'ny fitaovana dia nanolotra anay antsasaky ny herinaratra fa tsy tamin'ny bateria vaovao. Ny anton'ny fanapahan-kevitr'i Apple, tsy fantatsika, fa azontsika tsara izany alohan'ny hirosoana amin'ity fomba ity, tokony hamporisihinao ny rafitra hanovana ny bateria.
Isaky ny alakamisy dia mivory ny ekipan'ny bilaogy roa handefa mivantana ny Podcast fantson'ny TodoApple ao amin'ny YouTube, any amin'izay azonao atao mandray anjara mivantana mametraka fanontaniana aminay na manome hevitra momba izay lazainay. Raha tsy te halahelo amin'ny haino aman-jery ianao dia azonao atao ny mampandeha ny fampandrenesana ny App mba hahazoanao fampandrenesana isaky ny mampakatra horonantsary amin'ny fantsonay izahay na manomboka ny fandefasana mivantana.
Fa raha ho anao kosa dia milamina kokoa ny mihaino anay amin'ny alàlan'ny fampiharana podcast anao tianao, mila misoratra anarana amin'ny r fotsiny ianaomahazo fampandrenesana ianao isaky ny misy fizarana vaovao alaina ao amin'ny sehatra iTunes an'ny Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Podcast 9 × 15: Headphones ary ny fahanterana efa nomanina
Feral dia mandefa ny fiainana dia hafahafa tanteraka amin'ny lalao Season